RM PHYSIO • Fanosorana vatana sy fanorana NuRu
Fanorana ho an'ny vehivavy
Ny olon-tianao ve miaina amin'ny aretina mitaiza, sitrana amin'ny aretina, na mila fanampiana isan'andro fotsiny? Aza mitady intsony fa manana matihanina izahay mba hanome ny vahaolana marina mifanaraka amin'ny filàn'ny fitsaboana anao. Ho an'ny fanabeazana, Nuru fanorana dia malaza amin'ny rehetra satria misy ny misafotofoto erotika mahatahotra any. Afaka mamolavola nuru any Miami, FL ny olona iray nefa tsy mieritreritra an-tsaina intsony. Ny fanorana Nuru dia omen'ny vehivavy manerana an'izao tontolo izao. Miami dia any South Florida, izay paradisa ho azy. Ankoatr'izay ny fahafinaretana dia tsy mijanona amin'ny nuru, betsaka kokoa ny ao anatin'izany ny ora mahafinaritra ary mitondra anao any amin'ny tontolo hafa. Nuru dia an fanasitranana erotika teknika. Ireo mpanotra voaofana no manome ny fanorana. Ny mpanotra dia lahy sy vavy ary manintona tokoa. Ny teknikan'ny fanorana Nuru dia avy any an-tanànan'i Kawasaki (Japon). Matetika, ny vokatra menaka na gel dia ampiasaina amin'ny asa fanorana izay manana karazana fofona maharikoriko, ary tsiro ary indraindray miloko mavo na hatsatra. Raha eto Nuru dia misy gel ampiasaina ho an'io, tsy misy loko, tsy misy dikany ary tsy misy fofona. Satria i Nuru dia karazana fanorana erotika, mitaky mpanotra iray na maromaro ny fikosehana ny tenan'izy ireo amin'ny vatan'ny mpanjifa. Ho an'ity, ny roa tonta dia miboridana ary rakotra fanosotra fanosotra. Ny teny Nuru dia avy amin'ny fiteny japoney misy dikany malama. Mandritra io mpandray anjara amin'ny otra fitsaboanauru nuru io dia mahazo fifandraisana akaiky indrindra amin'ny vatan'ilay mpanotra. Ary koa, masseuse tsy mandà ny fifandraisan'ny vatana amin'ny zavatra erotika tanteraka. Ny gel nuru dia polysaccharide sulfated fucoidan, izay nalaina avy amin'ny ravina ny ahidrano ahitra zaridaina Sphaerotrichia mampisaraka. RMPhysio dia tantanan'i Raul Mosqueira (RM), manana traikefa efa ho folo taona mahery, voamarina amin'ny fanorana tamin'ny taona 2008. Mirehareha amin'ny traikefa goavambe amin'ny spaoro izy, miaraka amin'ny Chiroptactors, ary amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo mpitsabo isan-karazany. Manam-pahaizana manokana amin'ny fampiharana tsy miankina manokana momba ny:
Fanafody fitsaboana lalina
Fanorana amin'ny lalan-dra
Fanorana kibo ho an'ny fahasalaman'ny vehivavy
Fitsaboana Neuromuscular any Miami.
Famoahana Myofascial any Miami
Ny famotsorana ny myofascial dia karazana fitsaboana ara-batana izay matetika ampiasain'ny mpitsabo mba hitsaboana ny myofascial pain syndrome. Ny aretin'ny fanaintainan'ny myofasialy dia aretina mitaiza fanaintainana ateraky ny fahatsapana sy ny tery ao amin'ny tavy myofascial anao izay afaka miala sasatra mora foana nuru massage mpitsabo. Ireo sela ireo dia manodidina sy manohana ny hozatra manerana ny vatanao & ny fanaintainana mazàna dia avy amin'ny teboka manokana ao anatin'ny sela myofasikaly antsoina hoe "point trigres".
Ny famotsorana myofasialy nomen'ny mpitsabo mpanotra any Miami dia mifantoka amin'ny fampihenana ny fanaintainana amin'ny alàlan'ny fanalefahana ny fihenjanana sy ny fihenjanana amin'ireo teboka mitarika. Ny mpitsabo anao dia hanotra moramora ny Myofascia ary hahatsapa amin'ireo faritra mafy na mafy. Ny mpitsabo mpanotra dia hanomboka hanotra sy hanitatra ireo faritra izay mahatsapa henjana amin'ny tsindry an-tànana maivana ary avy eo manampy ny tavy sy ny fonony manohana amin'ny famoahana ny tsindry sy ny tery. Ny fizotrany dia naverimberin'ny mpitsabo imbetsaka tamin'ny teboka iray ihany ary tamin'ny teboka hafa mandrapahatsapan'ilay mpitsabo fa navotsotra tanteraka ny fihenjanana.
Famoahana fanorana farany mifarana any Miami. Ny famoahana myospinal dia mifantoka amin'ny famoahana spasm ny hozatra miaraka amin'ny hazondamosin'ny sub okipitaly (hozatra eo am-pototry ny cranium). Maro amin'ireo hozatra lehibe indrindra sy matanjaka indrindra no mifatotra amin'ny hazondamosina. Hozatra maherin'ny 700 no mandrafitra ny 2/3 amin'ny vatan'ny vatana.
Ny tanjon'ny famotsorana ny Myospinal dia ny hiarovana ny ati-doha sy ny tadin'ny hazon-damosina izay mamorona ny rafi-pitatitra. Miorina amin'ny fiheverana fa ny nerve sy endocrine (hormonal) dia mifehy ny fiasa rehetra ao amin'ny vatana, dia mikendry ny hamoaka ny kitrotro izay mety hiteraka fitsabahana amin'ny fiasan'ireo rafitra tena ilaina ireo. Ny Myospinal Release dia mampiasa fitaovana malefaka sy tsy manafika ary teknika an-tanana hanampiana ny vatana hamoaka ny spasm hozatra para-vertebral mitaiza, hanafaka ny rafi-pitatitra mba hiantohana ny fifindrana sy ny fahombiazana farany azo atao. Ny mpitsabo mpanotra any Miami dia maharitra 10 minitra mba hamoahana ny fanaintainana.
The fanentanana fanaovana spaoro raha ny marina dia avy amin'ny teknikan'ny fanorana soedoà izay noraisin'ny mpitsabo mpanotra any Miami.
Ny fanatanjahan-tena fanatanjahan-tena dia iray amin'ireo fanorana tianao indrindra amin'ny olona tia fanatanjahan-tena. Raha tia fanatanjahan-tena ianao fa tsy tokony hieritreritra mafy ny fitsaboana fanorana ho toy ny safidy amin'ny fomba fiainana ankapobeny. Ity no fomba mety indrindra hampidirana fanamaivanana amin'ny programa fanazaran-tena. Amin'ity karazana ity, ny mpitsabo dia manome teknika maro samihafa. Amin'ireny mason-tsakafo lalina ireny dia mamoaka tsiranoka sy fihenjanana ao anaty hozatra lalina. Mihemotra matetika ny vokany, fa ny ampitso dia mihatsara tanteraka ny fahatsapana ankapobeny. Ny tombontsoa azo avy amin'ny fanorana fanatanjahan-tena ataon'ny mpitsabo any Miami dia toy izao manaraka izao:
Ny fanatsarana ny fivezivezy ra sy ny sakafo mahavelona amin'ny hozatra. Fanatsarana ny fihetsika sy ny hozatry ny hozatra. Manampy hanafohy ny fotoana fanarenana eo anelanelan'ny fanazaran-tena.
Fanorana reflexology any Miami dia fahafinaretana lehibe indray. Ireo mpitsabo mpanotra eto Miami dia tena tsara fanahy manome an'io karazana fanorana io. Reflexology dia fantatra koa amin'ny hoe zona fitsaboana. Izy io dia karazana mitovitovy amin'ny fanorana nuru fa tsy misy menaka na gel. Izy io dia mifototra amin'ny rafitra pseudos Scientific an'ny faritra sy faritra reflex izay milaza fa misy sary ny vatana amin'ny tongotra sy ny tànan'ny mpitsabo miaraka am-boalohany fa ny asa toy izany dia misy fiovana ara-batana amin'ny vatana. Miaraka amin'ny fanaintainana sy fahatsapana amin'ny tongotra, ny voditongotra ary ny zanak'omby, aza hadino ny mampilaza ny haavon'ny fanaintainanao amin'ny mpitsabo anao mandritra ny fitsaboana anao mba hialana sasatra tsara kokoa.
2911 Bridgeport Ave, Miami, FL 33133, Etazonia